भाद्र १ मा आउने चलचित्र ‘मिस्टर भर्जिन’को टिजर सार्वजनिक::News from Nepal
भाद्र १ मा आउने चलचित्र ‘मिस्टर भर्जिन’को टिजर सार्वजनिक
काठमाडौँ – भाद्र १ गतेलाई आफ्नो प्रर्दशन मिती तोक्दै चलचित्र ‘मिस्टर भर्जिन’को टिजर सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक टिजरमा चलचित्रका मुख्य कलाकार गौरव पहारी, विजय बराल, कमलमणि नेपाल , मरिस्का पोख्रेललाई फिचार गरिएको छ । तीन युवाको यौन मनोविज्ञानको कथालाई चलचित्रमा देखाउन खोजिएको छ ।
वोर्ल्ड वाइड फिल्म्स डिस्ट्रिव्यूसन प्रा।लीको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्र ‘मिस्टर भर्जिन’लाई विशारद बस्नेतको निर्देशन गरेका हुन् । चलचित्रमा गौरव पहारी, विजय बराल, कमलमणि नेपाल, मरिश्का पोख्रेल, भोलाराज सापकोटा, रविन्द्र झा, सिर्जना सुब्बा लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ ।
‘मिस्टर भर्जिन’मा महेश दवाडीको कथा, रामेश्वर कार्कीको छायाङ्कन, विक्रम स्वाँर, दीपक याम सिंहको कोरियोग्राफी ,सुरज पण्डित, श्रीकृष्ण बम मल्ल, बुलेट फ्लो, आधा सुर, आर जे, मिस्टर प्रिन्सको सङ्गीत र मिलन डी। काप्रीले सम्पादन रहेको छ । चलचित्रमा टेक्निकल हेडको रूपमा दशरथ गिरी रहेका छन् ।
योगेन्द्र खनाल र जुनु गौतमको ‘चट्ट रुमाल’
अम्बिका गुरुङको ‘टेलिफोनको टावर’
‘लाउँदिन’ भन्दै आए ताम्राकार
अहिले कहाँ छन् छवि र शिल्पा ?
लाजै पचाएर स्वस्तिमाले बोली फेरिन!
बाढीपिडितको सहयोगार्थ ‘साइनो’ फिल्मको च्यारिटी शो हुँदै